ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ စတင်မိတ်ဆက်မယ့် Vivo Apex ရဲ့ All-display နဲ့ pop-up camera – AsiaApps
May 25, 2018 May 25, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ စတင်မိတ်ဆက်မယ့် Vivo Apex ရဲ့ All-display နဲ့ pop-up camera
အာလုံးကို အံ့အားသင့်စေမယ့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို Vivo က မကြာခင် မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖုန်းအမျိုးအစားကတော့ အားလုံး သိနှင့်ပြီးကြတဲ့အတိုင်း Vivo Apex ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo Apex အကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ Vivo Apex မှာပါဝင်တဲ့ အရမ်းအရမ်းကို မိုက်တဲ့ နည်းပညာ ၃ မျိုး အကြောင်းကို အရင်ပြောပါမယ်နော်။ Vivo Apex အဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ တီထွင်မှု ၃ခုက
– pop-up front-facing camera (ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တိုင်း ပေါင်မုန့်မီးကင်စက်က ထွက်လာတဲ့ ပေါင်မုန်းချပ် လေးလိုဖြစ်နေမယ့် front ကင်မရာ Sensor)
– အခု လက်တလောမှာ “ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး screen body” လို့ ယူဆထားကြတဲ့ All-display (မျက်နှာပြင်အပြည့်) ဒီဇိုင်း
– ဖုန်း screen ရဲ့အောက်ဘက် တစ်ဝက်လုံး ဘယ်နေရာ နှိပ်နှိပ် အလုပ်လုပ်မယ့် “in-display fingerprint sensor”
သူတို့လေးတွေနဲ့တင် Vivo Apex ကတော်တော်လေး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါပြီ။ လာမယ့် ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့မှာ သူတို့ ၃ ခုရဲ့ အသုံးပြုပုံ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို ရှန်ဟိုင်းမြို့ မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အောက်က ဗီဒီယိုလေးကိုရှိုးသွားဉီးနော်..
Vivo ဟာ all-display ဖုန်းတွေကို ပထမဦးဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလို့ သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vivo Apex ဟာလည်း လှပ ကျစ်လစ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ body ကြောင့် မထွက်ခင်ကတည်းက လူစိတ်ဝင်စားမှု အများအပြားရရှိထားပါတယ်။
Vivo Apex ရဲ့ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
• 6-inch edge-to-edge OLED display ,1.8mm bezel on top and sides ,.3 mm on the bottom.
• Screen resolution: 2,160×1,080 pixels
• In-screen fingerprint reader, dual fingerprint recognition.
• Hi-Fi audio chip creates more room for the battery by consolidating the DAC and three
amplifiers into one
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Vivo Apex ရဲ့ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို သတင်းထပ်မံသိရှိရရင် Asiaapps ကနေ ထပ်မံတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အ တွက် vivo fan တွေဆိုရင် စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။
Samsung နဲ့ Apple တို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုရလာဒ်